Ọ dịghị na Bible na ụmụ nwaanyị-nchu-àjà | Apg29
Ọ dịghị na Bible na ụmụ nwaanyị-nchu-àjà
- Ma ọ bụghị mmadụ ma!
Ọgbụgba ndụ ọhụrụ (New Testament) dị ka ndị nchụàjà nke ogbugba ndu ochie nwere ụbọchị. Anyị nwere ike na-aga Chineke n'ime na site na Jesus Christ!
E nwere ndị na-emegide ndị inyom ndị nchụàjà na-ekwere na ọ bụ Akwụkwọ Nsọ akwadoghị. Ma eziokwu bụ na ọ bụ dị ka unbiblical site nwoke-nchu-àjà.
Ọgbụgba ndụ ọhụrụ (New Testament) dị ka ndị nchụàjà nke ogbugba ndu ochie nwere ụbọchị. Ha bụ ndị nlereanya nke ndị na-abịa Oku - Onye Nchụàjà bụ Jizọs Kraịst.
All kwere ekwe ndị nchụàjà
Ọzọkwa, taa niile ndị nchụàjà ndị na-echekwa ma kwere na Jizọs. All na anyị nwere na kọntaktị na Chineke site na okwukwe na Jizọs Kraịst. Ọ bụghị naanị a obere họrọ otu kpọọ ndị nchụàjà nke ochie ọgbụgba ndụ.
1 Pt 2: 9. Ma ị bụ a họọrọ ọgbọ, a òtù ndị nchụàjà, mba dị nsọ, a peculiar ndị mmadụ: ka unu ga-akpọsa ya magburu onwe ya na-eme nke na-enye na-akpọ unu n'ọchịchịrị n'ime n'ìhè ya dị ebube.
Ya mere, ọ na-aghọ na-ezighị ezi na-elekwasị anya na-ekwurịta ihe na megide ụmụ nwanyị-nchu-àjà. The ụka na-azọrọ na e na-amalite ma ọ bụrụ na ọ bụ mgbe niile na Akwụkwọ Nsọ na ụdị ndị ụkọchukwu na-na dị otú ahụ Swedish ụka na ọ bụghị dịghị ihe ọzọ na Catholic.
Anyị nwere ike gaa ozugbo na Chineke
Anyị na-adịghị ugbu ọ bụla n'ụwa nchụàjà dị ka ihe intermediary na-esi na Chineke. Anyị nwere ike na-aga Chineke n'ime na site na Jesus Christ! O mepere ọhụrụ dị ndụ ụzọ site na cross nke Calvary.
Hibru 10:19. Olee otú anyị, umu-nnam, na-enwe nkwuwa okwu ịbanye kasị nsọ site n'ọbara Jizọs, 20 site ọhụrụ na ndụ bụ nke o megheere anyị site ákwà, ya bụ, anụ ahụ ya;
Ugbu a onye ọ bụla nwere ike na-anabata Jizọs na-azọpụta ma a nwa Chineke. Ị chọrọ m ezigbo enyi na-anabata Jizọs na-azọpụta ma ọ bụrụ na ị ka na-mere ya?
V 08, söndag 28 februari 2021 kl 22:49